Muxuu yahay Micnaha ka Dambeeya in Godey, Jijiga, Baabili iyo Dhagaxbuur oo Kaliya uu Telefiisnka Itobiya ka Waramo? – Rasaasa News
Muxuu yahay Micnaha ka Dambeeya in Godey, Jijiga, Baabili iyo Dhagaxbuur oo Kaliya uu Telefiisnka Itobiya ka Waramo?
May 30, 2010 Baabili iyo Dhagaxbuur oo Kaliya uu Telefiisnka Itobiya ka Waramo?, Jijiga, Muxuu yahay Micnaha ka Dambeeya in Godey
Waxaan si caadiya u fiirsadaa telefishinka Itobiya, gaar ahaana barnaamijka af Somaliga, si aan ula socdo isbadalada degaanka Somalida Ogadeeniya sida; tacliinta, caafimaadka, isgaadhsiinta, horumarinta beeraha, horumarinta xoolaha, nabadgaliyada, dhaqanka iyo guud ahaan dhaqaalaha.
Waxaan hubaa in ay jiraan iskudayo badan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa guud ahaan nolosha degaanka Somalida Ogadeeniya oo si aad ah uga dambeeya degaanada kale ee Itobiya. Arintaas dibu dhaca ah oo inta badan ay masuuliyiintu degaanka iyo xukuumada Itobiya la xidhiidhiyaan in ay ugu wacan tahay nabad galiyo xumadu degaanka Somalida.
Arinta nabad galiyada ayaa waxay noqotay arin si dhib yar ay marmarsiinyo uga dhigtaan masuuliyiinta degaanka iyo federaalkuba. Waxaana xaqiiq ah in ay jiraan sababo kale oo badan, oo aan anigu isleeyahay waxaa ugu horeysay in degaanka Somalida uu hore uga hadhay Itobiya inteeda kale xiligii xukuumadihii hore.
Waxaana aad u adag in si dhib yar wax looga qabto dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira degaanka Somalida Ogadeeniya; kuwaas oo ay ugu wacan yihiin wacyiga bulsha iyo aqoonta shaqada ee shaqaalaha degaanku u leeyihiin shaqooynka xilalka sare ah.
Xiliyadan dambe nabad galiyada degaanku aad iyo aad ayey u soo koraysaa, waxaanan hubaa in ayna jirin sida ay qirtay dawlada dhexe xoogaga khatar galin kara dhadhaqaaqyada shaqo ee ka jira degaanka Somalida Ogadeeniya. Balse waxaa jira masuuliyado keeni kara khatar dib u dhaca oo ku timaada degaanka Somalida Ogadeeniya.
Waxaad moodaa in masuuliyiinta iyo hayadaha dawladu ay isku soo uruuriyaan oo kaliya magaalooyin kooban iyaga oo aan ka warhaynin inta badan gabalada degaanka. Qorshaynta hawlaha degmooyinku waa masuuliyad saaran masuuliyiinta degaanka iyo in ay ogaadaan in degmo walba ay hesho qaybteeda.
Tusaale kooban, wasaarada warfaafinta oo ka mid ah hayadaha baahida wayn loo qabo in ay sheegto isbedelada ka dhaca degaanka Somalida Ogadeeniya waxay ku kooban tahay oo kaliya, magaalooyinka aan ciwaanka ka dhiganay. Waxaanan qabaa in haydaha dawladu ay la mid yihiin mid warfaafinta, oo ah mida ka muuqata telefishinka Itobiya.
Waxaan qabaa qof kasta oo fiirsada telefiishinka Itobiya, gaar ahaan barnaamijka Somaliga in ay isweydiin degaanka Somalidu miyuusan lahayn magaalooyin kale oo aan ahayn, Jijiga, Godey, Dhagaxbuur iyo Baabili. Kuwaas barnaamijyada laggaga hadlaa ay yihiin oo kaliya nabad diid iyo barnaamijyo aan nah lahayn oo u baahan la kordhiyo tayadooda soo jiidasho, hayadaha kale ee dawladuna ay muujiyaan waxqabadkooda ku aadan degaanka Somalida.
Fikirka qoraaga ayuu qoraalku ka turjumayaa, rasaas.com
Maxamuud Xiis Sagal
Wa,ahyo Dariskaagu u Fiirso Dhaqanka Somalida
Jwxo-shiil, oo u Goodiyey Jaango, Isana Iska Waabiyey